Madaxweyne Lafta Gareen oo Dowlad Goboleedka KGS dejinaya Baraawe – Kalfadhi
Madaxweyne Lafta Gareen oo Dowlad Goboleedka KGS dejinaya Baraawe
December 24, 2018 December 24, 2018 Kalfadhi
Warar uu Kalfadhi helay ayaa sheegaya inuu Madaxweynaha cusub ee Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS) ka fekerayo sidii uu maamulkiisu ugu shaqeyn lahaa magaalada Baraawe ee Gobolka Shabeellada Hoose, halkaas oo KGS u ah caasimad, balse daruufo amni xaalado ay ugu waa weyn yihiin oo taagan loo tagi waayey.
Hase ahaatee, iyada oon sharci ahaanshiyaha iney Xukumadda KGS saldhigato Baraawe laga qabin dood oo ay sidaas dastuurka maamulkaas ku dhigan tahay, ayaa waxa uu haddana Madaxweyne Lafta Gareen doonaya inuu hawshaas ku dhaqaaqo marka uu ka soo farxasho arrimo kale oo isugu jira qaar siyaasi ah iyo kuwa bulsho, oo uu xallintooda hadda ka wada magaalada Baydhaba, oo xarun ku-meel-gaar ah u KGS, sida ay Xildhibaanno KGS ah u sheegeen Kalfadhi.
Xildhibaan Madkariim Maxamed Iftiin ayaa, oo la hadlay Kalfadhi, ayaa sheegay iney og yihiin inuu maamulkoodu ku shaqeyn doono Baraawe, balse ay jiraan waxyaabo kale oo ka horreeya. “Baraawe shaki kuma jiro in ay tahay caasimaddii maamulka waana la aadi doonaa, balse wax badan ayaa ka horreeya. Waa in laga shaqeeyaa dib u heshiisiinta, dhameystirka maamulka iyo arrimaha ammaanka; markaas kadib ayaa laga hadli karaa in la aado Baraawe iyo in kale” ayuu yiri Xildhibaand Iftiin.
Sanatar Xuseen Sh. Maxamuud oo ka tirsan Golaha Aqalka Sare ayaa isaguna mar sii horreysay, qormo uu soo dhigay boggiisa Feysbuugga ku muujiyey inuu Dowlad Goboleedka KGS isu diyaarinayo siduu ugu wareegi lahaa xaruntiisa magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. Hase ahaatee, isagoo u doodaya wax ka qabashada cadaalad darro uu sheegay iney haysato dadka degan gobolka Bakool ayuu sheegay in marka uu maamulka KGS u guurayo Baraawe ay tahay iney gobolada kale ee KGS, oo uu ka mid yahay Bakool, helaan caddaalad.
“Maadaama Shabeellada Hoose loo diyaarinayo Xarunta Maamulka, waxaa loo baahan yahay in caddaalad loo sameeyo saddexda maamul ee ay Koofur Galbeed ka kooban tahay” ayuu Sanatar Xuseen ku yiri boggiisa Feysbuugga. Hadalkiisa waxa uu sii xoojinaya warar aan rasmi ahayn oo, intaanu Lafta Gareen u noqon Madaxweyne KGS, sheegayey inuu doonayo inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ugu wareejiyo Xarumaha Dowladda KGS magaalada Baraawe.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo xallinaya Khilaafka Kuxigeennadiisa iyo Guddiga Maaliyadda